၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ယူရို ၁ ဒသမ ၁ ဘီလျံ တန်ဖိုးရှိ အဝတ်အထည်များကို ဥရောပသမဂ္ဂက မြန်မာနိုင်ငံမှ တင်သွင်းခဲ့သည်ဟု ဥရောပသမဂ္ဂ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သံအမတ်ကြီးက ပြောကြားသည်။ “ဥရောပသမဂ္ဂဟာဆိုရင်လည်း မြန်မာ့ အထည်အလိပ်တွေအတွက် အလျင်အမြန် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဆုံးနဲ့ အကြီးမားဆုံး ပို့ကုန်ဈေးကွက်ကြီးတစ်ခု ဖြစ်လို့နေပါပြီ” ဟု.
ကလေးစစ်သားအသုံးပြုမှု ပပျောက်ရေး ပိုမိုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်နေသေးဟု ကုလပြောကြား
ကလေးစစ်သားများ အသုံးပြုမှု ရပ်တန့်ရေးအတွက် ကတိကဝတ် ပြုထားမှုကို ဖြည့်ဆည်းရန် မြန်မာ တာဝန်ရှိသူများအနေဖြင့် ပိုမိုတိုးမြှင့် လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်နေသေးသည်ဟု ကုလသမဂ္ဂ တာဝန်ရှိသူက ပြောကြားလိုက်သည်။
သောမတ်စ် ကင်းန် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက အဆိုပြုထားသည့် အရှည် ၄၇ ဒသမ ၅ ကီလိုမီတာရှည် ရန်ကုန်မြို့ပတ် မိုးပျံ အမြန်လမ်း တည်ဆောက်ရန် ပုဂ္ဂလိက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလျံ လိုအပ်ဖွယ်ရှိသည်ဟု သတင်းရင်းမြစ်များက Frontier ကို ပြောကြားသည်။.
ဘဏ်များလုံခြုံရေးနှင့် ပုဂ္ဂလိက လုံခြုံရေးကုမ္ပဏီများ၏ အခန်းကဏ္ဍ
ကျရောက်လာနိုင်သည့် ဘေးရန်များမှ ကာကွယ်ရန် လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများက စဉ်းစား ပြင်ဆင်လာကြချိန်တွင် ပုဂ္ဂလိက လုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီများအား ကြီးကြပ်ထိန်းကျောင်းနိုင်ရန် အစိုးရကလည်း ပြင်ဆင်နေသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ တင်ပို့လိုက်သည့် ဒေါ်လာ ၁၈ သန်းတန် စိတ်ကြွဆေးများကို မလေးရှား ဖမ်းမိ
မြန်မာနိုင်ငံကနေ တင်ပို့လိုက်တဲ့ လက်ဖက်ခြောက်ထုတ်တွေထဲကနေ စိတ်ကြွဆေး ၁ ဒသမ ၂ တန်ကို စံချိန်တင် ဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့ မလေးရှားအာဏာပိုင်တွေက ပြောပါတယ်။